NAGA SII SAX - Shenzhen Alphagreen vape Co., Ltd.
Shenzhen Alphagreen vape Co., Ltd oo la aasaasay 2018 oo ah soo saare ku takhasusay cilmi baarista, horumarinta iyo soosaarida qalabka Vape. Waxaan ku suganahay Shenzhen, oo leh marin gaadiid oo haboon. Dhammaan alaabooyinkeennu waxay u hoggaansamaan heerarka tayada caalamiga ah waxaana si weyn looga mahadceliyaa suuqyo kala duwan oo adduunka oo dhan ah.
Waxaan haynaa shaqaale kor u dhaafaya 50, oo ah tirada iibka sanadlaha ah oo ka badan USD 24 milyan. Xarumaheena sifiican u qalabeysan iyo tayada tayada wanaagsan dhamaan heerarka wax soosaarka waxay noo suurta gelineysaa inaan damaanad qaadno wadarta qanacsanaanta macaamiisha
Natiijo ahaan alaabteenna tayada sare leh iyo adeegga macaamiisha taagan, waxaan helnay shabakad iib ah oo caalami ah oo gaareysa Waqooyiga Ameerika iyo Yurub.
Waxaan nahay koox firfircoon, dhalinyaro ah, oo hami leh.
Ujeeddadeennu waa “Ka Fekir Weyn, Noqo Wanaagsan.” Nuug fikradaha cusub, si adag u xakamee tayada, adeegga raadraaca alaabta oo dhammaystiran. Waxaan jeclaan laheyn inaan dhisno xaalad guuleysata oo aan abuurno mustaqbal ifaya
Waxaan ula macaamilnaa macmiil kasta xamaasadeena iyo daacadnimadeena, waxaan u tixgelineynaa macmiil kasta sida saaxiibkeena qurxoon.
Waxaa naga go'an inaan isticmaalno alaab ceyriin oo tayo sare leh si aan u soosaarno wax soo saarkeena, 300k kartoon iyo 200k qalin la tuuro bishiiba, had iyo jeer ka helno jawaab celin wanaagsan macaamiisha.
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2021: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay. Alaabada Featured, Khariidadda bogga, qalinka cbd vape, qalinka vape batari, qalinka vape la tuuro, qalin vape dib u buuxin kara, cbd saliida la tuuro, 510 batari, Dhammaan Alaabooyinka